Ucwaningo Lokumaketha lwe-B2B: Izinzuzo eziyi-9 Zokumaketha Kwezenhlalo | Martech Zone
Ucwaningo Lokumaketha lwe-B2B: Izinzuzo eziyi-9 Zokumaketha Kwezenhlalo
Ithimba lakwaReal Business Rescue belilokhu linikezela le datha ku- Asebenza Kanjani Amabhizinisi E-B2B Abhekana Nezokuxhumana iminyaka embalwa manje futhi ngiyivuselele unyaka ka-2015. Ucwaningo luhlinzeka ngezibalo eziphelele zokutholwa kokumakethwa kwezokuxhumana ze-B2B futhi zikhomba ezinzuzweni eziyi-9 izinkampani ze-B2B ezizibonayo:
Thuthukisa abalandeli abathembekile
Nikeza ukuqonda emakethe
Thuthukisa amazinga okucinga
Khulisa ukubambisana kwebhizinisi
Nciphisa izindleko zokumaketha
Akucaci kangcono kunalokho. Ngisakholelwa ukuthi izinkampani ze-B2B zibukela phansi kakhulu umthelela wesikhathi eside ukukhangisa kwezokuxhumana okuba nawo ezindaweni eziningi. Kwangimangaza ngokweqiniso lokho social networking kwakungeyona inzuzo ebhalwe ohlwini - kepha mhlawumbe ukukhulisa inethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu kungaphansi kokuchayeka nobambiswano lwebhizinisi. Akungabazeki ukuthi izinkampani ezixhumana nathi zithola ukuvezwa okuningi kunalabo abasithinta kanye bese beshiya.
Isikhathi se-B2B sivame ukushiyela ithemba noma ikhasimende, hhayi umjikelezo wokuthengisa noma isikhathi somkhankaso wokumaketha wenhlangano. Ngenxa yalokhu, kudinga ukuthi amabhizinisi akhule ngempumelelo futhi agcine igunya lawo ezinkundleni zokuxhumana. Qhubeka nokunikeza inani futhi uzokwakha ubudlelwano obubalulekile.
Tags: ukumaketha kwe-b2bb2b izinzuzo zokumakethab2b izinzuzo zokumaketha ezokuxhum
I-infographic enhle ngemidiya yezokuxhumana.
Esikhathini sedijithali, imithombo yezokuxhumana kufanele isetshenziselwe ukuqhuba noma yimaphi amabhizinisi afaka phakathi ibhizinisi eliku-inthanethi nebhizinisi elingaxhunyiwe ku-inthanethi. Futhi ugcine ubuhlobo obuhle namakhasimende.